IREO MPIANDRAIKITRY NY TETIKASA TRANO HEVA MADAGASIKARA ANY AMIN'NY "LA BIENNALE DI VENEZIA"
Izany fandraisana anjara voalohan’ i Madagasikara any amin’ny « Biennale di Venezia 2019 » izany dia tontosa noho ny fiaraha-miasa sy ny fifampitokisana eo amin’ny Ministeran’ny Serasera sy ny Kolontsaina ny Repoblika Malagasy sy ny Fikambanana Kantoko izay tohanan’ny Fikambanana Revue Noire.
Tantara momba ny tetikasa
Martsa 2018: Ny Fikambanana Kantoko dia nahazo fankatoavana avy tamin’ny Ministeran’ny Serasera sy ny Kolontsaina ny Repoblika Malagasy handray anjara amin’ny tetikasa amin’ny fisoratana anarana any amin’ny “La Biennale di Venezia”
Jona 2018: Voarotsaka ny antotan- taratasy fisoratana anarana tany amin’ny “La Biennale di Venezia”
Jolay 2018: Nampiantso ireo mpiandraikitry ny tetikasa sy ny mpanakanto voakasika ny “Biennale de Venise”
Aogositra 2018: Namafisin’ny “Biennale de Venise” ny fandraisan’i Madagasikara anjara
Septambra 2018 : Fandreketana an-taratasy ny fandraisan’i Madagasikara anjara
Ireo anjara asan’ireo mpiara-miombonan’antoka sy ireo mpandray anjara ao anatin’ny tetikasa dia voatsinjara ho toy izao :
Ny mpaniraka mampanao ny tetikasa dia ny Ministeran’ny Serasera sy ny Kolontsaina ny Repoblika Malagasy
Ny mpanakanto dia i Joël Andrianomearisoa
Ireo mpiandrakitry ny lafiny fampirantiana dia Andriamatoa isany Rina Ralay Ranaivo sy Emmanuel Daydé
Ireo mpikarakara ny tetikasa dia ny Fikambanana Kantoko Antananarivo sy Revue Noire Parisy.
KANTOKO FIKAMBANANA HO AMIN'NY FAMPIVOARANA NY ZAVA-KANTO SY NY KOLONTSAINA ETO MADAGASIKARA
Ny Fikambanana Kantoko dia natsangan’ny vondrona mpanakanto sy matihanina malagasy tamin’ny taona 2015, noho ny fahatsapany ny maha
zava-dehibe ny fiarahamiasa hampivoarana sy ny hampahafantarana ny zava-kanto sy ny kolontsaina eto Madagasikara.
Ny Fikambanana Kantoko dia endriky ny fahavononany handray an-tanana ny hoaviny, izay voasedra hatrany amin’ny toe-javatra sady sarotra no tsy azo antoka.
Nanomboka ny taona 2007, ireo mpamorona ny Fikambanana Kantoko dia tao ambadiky ny tetikasa ara-java-kanto sy ara-kolotsaina maro.
Noho ny fanohanan’ireo andrim-panjakana sy ny sehatra tsy miankina dia nanatontosa hetsika isankarazany izay nanamarika ny maro ny Fikambanana Kantoko tahaka ilay fampirantiana iraisam-pirenena 30 et Presque-songes (2009 et 2011), Parlez-moi (2016) izay hetsika ara-java-kanto nentina namakivaky ny tànanan’Antananarivo tamin’ny alalan’ny fanehoana mivantana kanto miaro fahatsarana izay notanterahana tamina toerana tsy mahazatra sy mahazendana. Ny tetikasa notontosain’ny Fikambanana Kantoko farany dia ny fanohanana nataony tamin’ny fanatanterahana fampirantiana lehibe iray izay marolafy, hiombonana ary maneho ny dingana maro nolalovan’ny fanehoana ara-javakanto Malagasy eo amin’ny “kanto ankehitriny”: “Ici la limite du royaume est la mer (2018)”
Resy lahatra ireo mpikambana fa ireny tetikasa ireny dia fomba hita maso hampifandraisana ireo hery velona sy ireo angovom-pamoronana eo amin’ny fireneny, fa ihany koa fomba entina manangana fiaraha-miasa sy fifanekena ary finamanana amin’ireo singa samihafa ao anatin’ny fiaraha-monina malagasy, izay voasaratsaraka, mitady mari-toerana vaovao iraisana sy fomba fisainana hiombonana hifampizarana ary ireo lafiny tsara hifampaherezana.
Tao anatin’ny fitohizan’ireo asany no naneken’ny Fikambanana Kantoko ny fanatanterahana ny Trano Heva Madagasikara amin’ny andiany faha 58 ny
« Biennale di Venezia ». Tamin’ny alalan’ilay mpanakanto “plasticien” Joël Andrianomearisoa dia nahazo ny fanohanan’ny Ministeran’ny Kolontsaina amin’ny fanatontosana ity andraikitra goavana hanoratra tantara tsara sy endrika feno famoronana ho an’ i Madagasikara amina hetsika goavana sy mana-danja momban’ny kanto ankehitriny maneran-tany.
Ity fotoana izay noraiketina amin’ny tantara ity dia maneho ankehitriny hambom-po hiombonana amin’ny firenena manontolo.
Rina Ralay Ranaivo Filoha, Solonirina Marie Joséphine Mpitantsoratra, Lisiane Randrianalisoa Mpitambola
FIKAMBANANA HO AN'NY FANEHOANA NY "KANTO ANKEHITRINY" AFRIKANA SY MANERAN-TANY
Revue Noire, fanoloran-tena
Ny Fikambanana Revue Noire dia niorina tamin’ny taona 1991, niainga tamina famoronana boky momba ny famoronana “kanto anketriny “afrikana izay mitovy anarana aminy.
Jean Loup Pivin sy Pascal Martin Saint Léon hatrany no nitarika azy hatrany am-piandohana. Ankehitriny, amin’ny maha Fikambanana azy dia miompana manokana amin’ny fanampiana sy fanohanana ireo mpanakanto sy ireo tetikasany no tena hiantsorohan’ny Fikambanana fa koa misy ampahany fanontana boky ihany.
Ny Revue Noire dia naorina mba hahafahana mampahafantatra ireo mpanakanto sy mpamorona avy amin’ny kaontinanta afrikana sy ireo izay monina any ivelany maneran’izao tontolo izao. Niaraka tamin’ireo namany tany am-boalohany: Simon Njami, Bruno Tilliete sy N’Goné Fall, ny valin’ny asa mafy izay natao tamin’ny alalan’ny fampahalalana mpanakanto tsy dia fantatra loatra mihoatra ny telo arivo nandritry 10 taona, dia ny mba hahafahan’izy ireny mandray anjara amin’ny “La Biennale di Venezia”.
Tsy misy hetsika ara-java-kanto natokana ho an’i Afrikana ao Eoropa na ao Etazonia fa kosa ao anatin’ny fahatsarana iraisam-pirenen’ny
“kanto ankehitriny”. Ny fankasitrahana ny zava-kanto afrikana kosa dia endriky ny fifaranan’ny tsy fanekena io kaontinanta io ho ohatra maneran-tany. Toy izay niseho tamin’ny taona 1995 niaraka tamin’ i Ousmane Sow avy any Sénégal sy Jane Alexander avy any Afrika Atsimo. Ary avy eo dia nanomboka nipoitra ireo trano heva tahaka ny fitambarana amina kaontinanta iray, amina andiany tokana, Afrika nahitana an’i Angola, Afrika Atsimo, Côte d’Ivoire, Haïti…
Amin’ny andiany 2019, ny Revue Noire dia mifototra mafy amin’ny fiandraiketana ny Trano heva Madagasikara voalohany any amin’ny “Biennale di Venezia” miaraka amin’ny Ministeran’ny Kolontsainan’ i Madagasikara sy ny Fikambanana Kantoko.
Ny fifantenana an’ilay mpanakanto, Joël Andrianomearisoa, dia antoka ho an’ny Revue Noire hanatanterahany ny asany amin’ny maha mpamokatra azy. Araka izany, hanokana tanjaka sy izay rehetra ananany, izay vitsy tokoa ny firenena afrikana manao izany noho ireo laharampahamehana maro. Fihetsika izay sarotra toherina na dia…
Na dia ny fanehoana fotsiny fa manana mpanatalenta maro ny firenena iray sy manao izay fomba rehetra hampahafantarana azy ireny dia efa manova ny lazan’ilay firenena ary azo antoka ny fahatokisan-tenan’ny vahoaka amin’ny sehatra rehetra. Eny na dia vitsy aza indraindray ny hetsika mifandraika amin’ny famoronana sy ny kolontsaina dia zava-dehibe ny fandraisana anjara amin’ny fomba mendrika izay hahafahan’ny tsirairay maneho sy mizara ny maha izy azy sy ny fomba fijeriny ao anatin’ireny fotoam-pifaneraserana miavaka iraisam-pirenena ireny.
Ao anatin’ny fitohizan’ny faniriany hatrany am-piandohana, Revue Noire dia mirehareha sy faly mandray anjara amin’ny fampivelarana ny asan’i
Joël Andrianomearisoa amin’ny alalan’ny trano heva Madagasikara any amin’ny “Biennale di Venizia de 2019”.
Jean Loup Pivin sy Pascal Martin Saint Léon Mpanorina